[MMAnime] Ban To : Ban To
Type: TV Episodes: 12 Status: Finished Airing Aired: Oct 9, 2011 to Dec 25, 2011 Premiered: Fall 2011 Broadcast: Unknown Producers: Pony Canyon, AT-X, Magic Capsule, Bulls Eye Licensors: Funimation Studios: David Production Source: Light novel Genres: Action, Comedy Theme: Martial Arts Duration: 24 min. per ep. Rating: PG-13 - Teens 13 or older Review - Satou ဆိုတဲ့ ထက်တန်းကျောင်းသားလေးက SEGA ဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သည်။ တစ်နေ့မှာ‌တော့ သူစတိုးဆိုင်တစ်ခုကို ညစာဝယ်ဖို့ဆိုပြီး ဝင်သွားပါတယ် ။ အဲ့မှာ ( Ban -to )ထမင်းဘူးကို ဝယ်ဖို့ကြိုးစားရင် ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မေ့သွားပါတယ် ။ နိုးလာတဲ့အခါမှာ‌တော့ ထမင်းဘူးလည်းတစ်ဘူးမှ မရှိတော့တာကြောင့် တခြားဟာကို ဝယ်ပြီးလာရပါတော့တယ်။နောက်တနေ့အဲ့စတိုးဆိုင်ကို သွားတဲ့အခါမှာတော့ ..........